မေမေနဲ့အတူ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ဆင်တူဝတ်ပြီး အိုက်တင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြကာ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ???????? လေး - Maythadin
မေမေနဲ့အတူ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ဆင်တူဝတ်ပြီး အိုက်တင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြကာ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ???????? လေး
ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်နဲ့အဆိုတော်စန္ဒီ မြင့် လွင်ကတော့ အေးချမ်းသာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို Treasureဆိုတဲ့သမီးချောလေး တစ်ယောက်နဲ့အတူပိုင်ဆိုင် ရရှိထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမီးလေးTreasure ကတော့ ယခုဆိုရင်အသက် တစ် နှစ် နဲ့လေးလတောင်
ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ မေမေစန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့သမီးလေးကို သူ့ရဲ့ ရူတင်တွေမှာခေါ်သွားလေ့ရှိသလိုကြော်ငြာလေးတွေကိုလည်းအတူတူရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။Treasureဟာလည်း၀၀ကစ်ကစ်ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းနေပြီး ယခု ဆိုရင်တော့ တွတ်တီးတွတ်တာစကားလေးတွေကိုတောင်ပြောတတ်
နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လည်း အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးက စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့သမီးလေး ကိုအသည်းသည်းလှုပ်ချစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့သမီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအမြဲဖော်ပြလေ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်း
မေမေအတူအင်္ကျီဆင်တူဝတ်ပြီး အိုက်တင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြကာချစ်စရာကောင်း နေတဲ့ Treasureလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို”မေမေနဲ့ ထရက်ရှာဆင်တူလေးပေါ့ “ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ အတူ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဝတ်စုံဆင်တူဝတ်ပြီးအရမ်းချစ်စ ရာ ကောင်းနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုအပွညျ့အဝပိုငျဆိုငျရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျနဲ့အဆိုတျောစန်ဒီ မွငျ့ လှငျကတော့ အေးခမျြးသာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို Treasureဆိုတဲ့သမီးခြောလေး တဈယောကျနဲ့အတူပိုငျဆိုငျ ရရှိထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။သမီးလေးTreasure ကတော့ ယခုဆိုရငျအသကျ တဈ နှဈ နဲ့လေးလတောငျ
ရှိနပွေီလို့သိရပါတယျ။ မမေစေန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့သမီးလေးကို သူ့ရဲ့ ရူတငျတှမှောချေါသှားလရှေိ့သလိုကွျောငွာလေးတှကေိုလညျးအတူတူရိုကျကူးနပွေီဖွဈပါတယျ။Treasureဟာလညျး၀၀ကဈကဈပါးဖောငျးဖောငျးလေးနဲ့ အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးနပွေီး ယခု ဆိုရငျတော့ တှတျတီးတှတျတာစကားလေးတှကေိုတောငျပွောတတျ
နပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လညျး အနုပညာရှငျညီအဈကိုမောငျနှမတှနေဲ့ပရိသတျတှအေားလုံးက စန်ဒီမွငျ့လှငျရဲ့သမီးလေး ကိုအသညျးသညျးလှုပျခဈြနကွေတာဖွဈပါတယျ။ စန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့သမီးရဲ့ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနအေမွဲဖျောပွလပေ့ါတယျ။ဒီနမှေ့ာလညျး။
မမေအေတူအင်ျကြီဆငျတူဝတျပွီး အိုကျတငျအမြိုးမြိုးလုပျပွကာခဈြစရာကောငျး နတေဲ့ Treasureလေးရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို”မမေနေဲ့ ထရကျရှာဆငျတူလေးပေါ့ “ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ အတူ စန်ဒီမွငျ့လှငျကတငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာဝတျစုံဆငျတူဝတျပွီးအရမျးခဈြစ ရာ ကောငျးနတေဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျတို့သားအမိနှဈယောကျရဲ့ခဈြစရာကောငျးတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိုတော့ ပရိသတျကွီးအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
ထက်ထက်မိုးဦးဆီကနေ သိန်း (၁၅၀) တန်ရတနာပစ္စည်းတစ်​ခုကို ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပြီးချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ သက်သေပြခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် (ရုပ်​သံ)
အမွနျလမျးပျေါမှာ ကားအကျစီးဒနျ့ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အသကျအန်တရာယျကလှတျမွောကျခဲ့တဲ့ ထှနျးထှနျး
လိုချင်တာတွေဝယ်ပေးပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးတဲ့ ချစ်ရပါ​သောခင်ပွန်းကြောင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုလှလာတဲ့ အိမ့်ချစ်ရဲ့ဗီဒီယို (ရုပ်​သံ)